Tọghatara Ya TIFF - Ihe Ntanetị Ihe ntanetị na ntanetị
Tọghatara Ya TIFF
Gbanwee onyonyo na TIFF ntanetị. Ọ dịghị mkpa nyefe faịlụ!
Okwu mmalite nke ngwa ịntanetị Ihe Ntụgharị Foto
Ihe ntụgharị ihe ntanetị anyị na-enye gị ohere ịgbanwe ihe oyiyi na ọtụtụ ụdị onyonyo (na PDF) ozugbo site na ihe nchọgharị gị. Ihe ntụgharị anyị pụrụ iche: ọ dịghị mkpa ka ị nyefee faịlụ onyonyo gị na sava dịpụrụ adịpụ iji gbanwee ha, ntụgharị site na ihe nchọgharị n'onwe ya! Lelee ngalaba "Enweghị nnyefe data" n'okpuru iji mụtakwuo.
Ndị ọzọ na-atụgharị ihe ntanetị na ntanetị na-eziga faịlụ gị na sava iji gbanwee ha wee budata faịlụ ndị ahụ laghachi na kọmputa gị. Nke a pụtara na iji tụnyere ndị na-atụgharị onyonyo ndị ọzọ, onye ntụgharị anyị na-eme ngwa ngwa, akụ na ụba na ịnyefe data, yana enweghị aha (echekwara nzuzo gị kpamkpam ebe ọ bụ na anaghị ebufe faịlụ onyonyo gị na ịntanetị).
Nwere ike ịgbanwe ihe onyonyo na - akparaghị ókè na - enweghị wụnye sọftụwia ọ bụla, na - enweghị ịbanye, yana na - enweghị ịnyefe faịlụ gị. A na-akwado ndọtị faịlụ ndị a dị ka ndenye: jpg, png, psd, tiff, gif, bmp, tga, ico, xcf, miff, dcm, xpm, pcx, fits, ppm, pgm, pfm, mng, hdr, dds, otb , txt, p.
Anyị nwere olile anya na ị ga-anụ ụtọ ngwa ọrụ a!